पत्याउनु हुन्छ ? महिलाको पहिलो रोजाइमा लजालु पुरुषको शुक्रकिट
सूचना प्रविधिको आजको युगमा हरेक चिज अनलाइन बजारमै उपलब्ध छन् । क्लिक गरेको भरमा चाहेको कुरा पाउन सकिने जमाना आइसक्यो । मोबाइल, ट्याब, फर्निचर, खानेकुरा, लत्ताकपडा त सामान्य भैसक्यो । इन्टरनेटको बजारमा शुक्रकिट समेत उपलब्ध हुन थालेको छ । इन्टरनेटमै शुक्रकिटको उपलब्धताले होला शुक्रकिट प्रति महिलाको छनौटको अधिकार पनि विस्तार भएको छ र रुची पनि […]
एजेन्सी । नेपालमा संघीय व्यवस्थाको शुरू भएपछि सरकारले जथाभावी रूपमा कर लगाएर जनतालाइ करको भार लगाएको समाचार बनिरहन्छ । संसददेखि सडकसम्म मात्रै होइन, सामान्य चियापसलदेखि तारे होटलसम्म करको करकर चलिरहन्छ । तर संसारमा यस्ता देश पनि छन्, जहाँ अचम्म चिजमा कर लगाएको पाईन्छ । १. सेक्स कर जर्मनमा वेश्यावृतीलाई वैधानिकता दिए पनि त्यसलाई ‘सेक्स कर’ […]
एजेन्सी । उमेर ढल्किँदै जाँदा बिहे गर्ने एउटा पनि केटा नपाएपछि सहरभरिका केटीहरुले सामूहिक रुपमा केटा पाउँ भन्दै गुहार मागेका छन् । यो ब्राजिलको घटना हो । ब्राजिलको नोइभा डो कोर्डेरियो सहरमा एकजना पनि अविवाहित पुरुष छैनन् । तर ६ सय जना अविवाहित महिला छन् । ती मध्ये अधिकांस ३५ वर्ष मुनिका छन् । अविवाहित […]
काठमाडौँ । लामो समय सुत्नु स्वास्थ्यका लागि समेत लाभादायी हुने विषय बेलाबेलामा अनुसन्धान हुँदै आएको छ । अनुसन्धानमा लामो समय सुत्दा स्वास्थ्यमा समस्या हुने विषय विभिन्न अध्ययनहरुले समेत देखाएका छन् । यस्तोमा काठमाडौँमा समेत धेरै सुत्नेहरुका बिचमा प्रतियोगिता गर्न लागि एक गैरसरकारी संस्थाले अध्ययन शुरु गरेको छ । सात दिन सात रात लामो समय सुत्ने […]
पीनले अनुहार छोपेर गरिएको ‘क्याटवक’
मान्छेका रहर पनि कस्ता कस्ता । जहाँ आफ्ना रहर पूरा गर्न जुनसुकै दुःख कष्टको पनि ख्यालै नहुने । जापानमा भएको एक फेसन शो मा मोडेलहरु अनौठो शैलीमा प्रस्तुत भए । टोकियोमा चलेको फेसन सप्ताहमा एउटा यस्तो प्रदर्शन देखियो जहाँ सुन्दरीहरुले सेफ्टी पीनले अनुहार छोपेर क्याटवक गरेका थिए । यो फेसियल ज्वेलरी डिजाइनर केसुकी इमाजाकीको सिर्जना […]
बिहान सबेरै उठ्नका लागि प्रयोग गर्ने अलार्म कस्तो छ? अलार्म बज्दा अझै मज्जा मानेर सुत्ने गर्नु त भएको छैन? कि अनिवार्य उठाउने आलर्म होस भन्ने चाहनु हुन्छ? यस्तै एक आलर्मको प्रयोग सम्बन्धि भिडियो तपाईलाई देखाउँदैछौ । यो भिडियोमा एउटा यस्तो अलार्म देखिन्छ जसले निदाइरहेकी एकजना महिलालाई थप्पड हानेर ब्युँझाएको छ । सुन्दा अचम्म लाग्ने यो […]
हाकिमसँग अनुमति लिएर गर्भाधारण ?
विश्वमा अनेकन नीति र नियम हुन्छ । जसले हामीलाई अचम्मित बनाउँछन् । जापानको यस्तै एक नियम छ जुन सुन्दा तपाईंलाई छक्कै लाग्न सक्छ । गर्भधारणका लागि समेत हाकिमसँग इजाजत लिनुपर्छ भन्ने कुरा सुन्दा पनि पत्यार नलाग्न सक्छ । तर, नपत्याई सुख नै छैन । प्रसङ्ग जापानको हो । समाचारमाध्यमहरुले जनाए अनुसार, जापानको एक कम्पनीका हाकिमले […]
आजभोलि सबैजसो घरमा साङ्लाको प्रकोप बढ्न थालेको छ। मानव विकाससँगै घरेलु साङलाको पनि विकास भएको पाइन्छ । समयक्रम सँगै ती साङलाहरु शक्तिशाली बन्दै गएका छन्। अहिले गाउँ तथा शहर सबैतिर साङ्लाको बिगबिगी बढेको छ । एउटा पोथी सांङलाले एक वर्षमा ३०० वटासम्म बच्चा जन्माउँछ। त्यसका कारण पनि साङ्लाको संख्या बर्सेनी बढ्दो छ । जसका कारण […]
सुर्खेत-जनता र जनप्रतिनिधिबीचको दूरी घटनाउन विभिन्न कार्यक्रम आयोजना भइरहेका छन् । ति कार्यक्रमले आम जनतालाई कति फाइदा पुग्ला भन्ने आँकलन नभएपनि कार्यक्रमको उद्घाटनको शैलीले जनप्रतिनिधिहरु चर्चित बन्ने गरेका छन्। सामान्य कार्यक्रमको उद्घाटन गर्न शीर्ष नेता तथा देशको कार्यकारी भूमिकामा रहेको व्यक्ति पुग्ने गरेको गुनासो बढिरहेका बेला एक प्रदेश मन्त्रीले फरक शैलीले कार्यक्रम उद्घाटन गरेपछि चर्चामा […]